CUDURADA DUCKLINGS: NOOCYADA, CALAAMADAHA, DAAWEYNTA, TALLAABOOYINKA KA HORTAGGA - BEERAHA DIGAAGA
Maxay ducklings ku xanuunsan karaan: liiska cudurrada
Si kasta oo aan u eegno sida aan u daryeelno xayawaankayaga, laakiin way adag tahay in la baabi'iyo dhammaan sababaha suurtagalka ah ee cudurada, sidaas darteed, si ay uga jawaabaan waqtiga iyo qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo wax yar calaamadaha iyo cawaaqibka cudurada qaarkood.
Cudurada ducklings waxaa loo qaybiyaa infekshin iyo kuwa aan haboonayn ee dabiiciga ah. Ugu horreyn, waxaanu taxnaa cudurada aan la-qaadin.
Marka cunno aan dheellitirneyn iyo maqnaanshaha walxaha lagama maarmaanka ah ee cuntada ee ducklings waxay keeni kartaa cuduro aan la xiriirin infakshanka.
Baro sida loo cuno ducklings saddexda usbuuc ee hore.
Cudurada aan faafin waxaa ka mid ah avitaminosis, cuticle, omphalitis, iyo cudurrada kudka.
Fitamiin la'aanta iyo macdanta ee cuntada ee ducklings ayaa keena avitaminosis. Shimbiraha xanuunku maaha khatar ku ah dadka kale.
Waxyaabaha soo socda ayaa tilmaamaya dhibaatooyinka:
chicks si tartiib tartiib ah u korodh iyo koraan si liidata;
sicirka ugu yar ee saamiga dhalinyarada;
la'aanta cunto xumo.
Ma taqaanaa? Kirghiz waxay aaminsan tahay in gabadhii uu soddogga ahaa, ay ku maydheen harada xayawaanka ah, waxay u beddeshay najax guduud ah. Sababtoo ah asalka qofka naaska ka soo gaaray, Muslimiintu ma cuneen hilib shuban.
Dhibaatadan waxaa lagu xallin karaa iyada oo la go'aaminayo nooca fitamiinta aan ku filneyn oo lagu darayo quudinta.
Iyada oo la'aanta fitamiin A, calaamadaha soo socda ayaa dhacaya:
indhaha qallalan, mararka qaarkood jiritaanka nabarrada;
dheecaan ka yimaada duufaanka.
Cudurku si tartiib ah ayuu u kobcayaa. Daaweeynteeda, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo ducklings tiro cagaaran, cunto fudud, karootada, iyo sidoo kale saliidda kalluunka iyo fiitamiin A.
Avitaminosis D waxaa la socda astaamahaas oo kale:
curvature of addimada iyo dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa;
Calaamadaha ayaa la baabi'in doonaa marka lagu daro saliidda kalluunka, fitamiin D2 iyo D3. Si loo soo saaro fitamiin D, laydhka ultraviolet ayaa loo baahan yahay, sidaas darteed chicks waa in qorraxda, iyo maqnaanshaha, dhir nadiif ah iftiinka ultraviolet waa in la abuuro.
Waxyaabaha soo socda ayaa tilmaamaya la'aanta vitamin E:
Xaalad murugo leh;
qufac iyo garaaca wadnaha;
indhaha daboolay muddo dheer.
Si aad u bogsato waxaad u baahan tahay inaad gasho cagaarka cuntada, dabacasaha, baradho, khamiir, bran iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo, iyo sidoo kale tokopherol (1 dhibic oo ah quudin kasta).
Iyadoo la'aanta vitamin B1 ee jidhka ee dheef-shiid kiimikaadka yar-yar.
madaxa dib loo tuuray;
xaaladaha halista ah, ayaa baraarugay horumariyaa.
Daaweyntu waxay isticmaashaa khamiir, cagaar iyo digirta la kariyey, iyo weliba fitamiin B1.
Ku xad-gudubka oodhanka iyo dheellitirka borotiinka waxaa keena la'aanta vitamin B2.
Tani waa caddayn calaamadaha soo socda:
dhiig yari iyo dhiig yari;
curvature of paws.
Cuntada caanaha, khamiirka, hilibka iyo lafaha iyo cuntada kalluunka, jeermiska qamadiga ah waa in lagu daraa quudinta.
Iyada oo yareyn la'aanta vitamin B12, nuugista borotiinka ayaa daciif ah.
awood la'aanta guuritaanka;
Daaweynta, alaabada xayawaanka iyo alaabada caanaha waxaa lagu soo bandhigay cuntada. Marka beriberi loo isticmaalo daroogo sida "Tetravit", "Aminovital" ama "Trivitamine".
Maqnaanshaha walxaha macdanta laga helo ayaa kicin kara bilawga cudurka qaaxada.
in la cuno balka, dhulka ama ciidda.
Hordhacda cuntooyinka naas-nuujinta, cuntada lafaha iyo cusbo-iodiin ayaa kaa caawin doonta daaweynta.
Bisha kowaad, dhallinyaradu mararka qaarkood waxay saameeyaan guntin (gaastritir barar ah), taas oo boogaha iyo nabarada necrotic ay ka muuqdaan caloosha caloosha.
Waxay noqon doontaa mid waxtarka kuu leh inaad barato sida loo gooyo baalasha duurjoogta, sida loola dhaqmo shinbiraha gacmahaaga, sida loo sameeyo quudinta ducks, iyo sidoo kale sida si habboon oo dhakhso ah u dhuujiso nuugista guriga, marka loo eego dufanka dufanka leh iyo ukunta duurjoogta.
Cudurkan waxaa sababa la'aanta fiitamiin A oo waxaa lagu tilmaamay:
shuban madow leh oo leh cunto kale oo aan la daboolin;
Marka la daaweynayo cuticle, fitamiin A, nicotinic acid iyo sulfate birta ayaa lagu daraa quudinta. Waxaa lagugula talinayaa in aad biyo ka soo baxdo xalka dareeraha dhalada, laakiin waa inay ahaato mid hooseeya si aad uga fogaato gubashooyinka dheecaanka maskaxda.
Mararka qaarkood unugyada ku wareegsan wareegga xundhurta ayaa noqda barar.
Cudurkaan waxaa loo yaqaan 'omphalitis' wuxuuna muujiyaa laftiisa:
guduudasho, barar iyo barar nudayaasha ku wareegsan xuddunta;
mararka qaarkood malaxdu waa qarsoodi tahay;
chicks wada kulmaan, madaxooda u sujuudaan.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay mitiriga Giriigga ah, xayawaanka ariga ah uma ogolaanin Penelope (xaaskiisa Odyssey) inay qoydo. Magaca Penelope wuxuu u tarjumayaa "teal" - dooxooyinka webiga.
Dagaalka ka dhanka ah cudurka waxaa loo isticmaalaa cadar leh fal ficil ah. Intaas ka hor, maqaarka waxaa lagu nadiifiyaa xalalka jeermiska (hydrogen peroxide ama furatsilin). Kadibna aagga bararsan waxaa lagu daaweeyaa cadar.
Fledglings waxaa inta badan ay saameeyaan caabuqyo kala duwan. Iyadoo la tixgelinayo in cuduro badan aan la daaweyn, waxaa lagama maarmaan ah in la aqoonsado waqtigooda oo ay ka soocaan bukaanka ama baabi'iyaan si aysan u luminin dhamaan xoolaha. Waxaan ka hadli doonaa calaamadaha iyo daaweynta cudurrada ugu badan ee faafa.
Ducklings oo da'doodu tahay 2 ilaa 6 toddobaad ayaa ugu nugul coccidia. Microorganisms, helitaanka jirka ee xayawaanka yaryar, ayaa ah kuwa xayawaanka ku jira xuubka mindhicirka. Tani waxay la mid tahay geerida lakabka epithelial, iyo sunta qarsoon ee Eimeria sababo geedi socodka bararka ee xuubka dheecaanka.
Shaqada garaacista xummadda.
On guuldarada ah ee coccidiosis muujinaysaa:
shuban madow oo dhiig leh;
raashin iyo biyo qabasho;
miisaanka oo degdeg ah;
Ducklings waa daciif ah oo gaabis ah;
Fuuqbax ayaa keenta dhimasho;
5-7 maalmood ka dib marka infekshanka ka dhaco, paralisyadu waxay dhacdaa.
Inta badan shimbir buka ayaa la baabi'iyay, laakiin daweynta ayaa waqtigeeda bilaabmeysa waxay noqon kartaa mid wanaagsan. Nestlings waa la go'doomiyay waxaana lagu daaweeyaa "Norsulfazol" (oo lagu daray biyo) iyo "Osarsol".
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa daroogada "Furazolidone", kaas oo lagu shubay quudinta. Aad ayey muhiim u tahay iyadoo la raacayo tilmaamaha si sax ah loo xisaabiyo qiyaasta daawooyinka.
Cudurka ayaa si tartiib ah u kobcaya waxaana laga yaabaa inuu dhaco 10 bilood ka dib. In chicks in inta badan waxay saameeyaan sanbabada, iyo xubnaha kale - inta badan ka yar tahay shimbiraha kale. Cudurku wuxuu ku faafaa maro daro, quudin ama dhibco dhasha.
Waa muhiim! Shimbir xanuun ayaa la burburiyaa. Cudurku wuxuu u gudbaa dadka, sidaas darteed hilibka iyo ukumaha waa in aan loo isticmaalin cunto.
Calaamadaha qaaxada waxay noqon karaan:
Wadnaha oo barara;
Ducklings ilaa laba bilood ayaa badanaa la kulma qabow. Tani waxay si gaar ah u tahay dabeecadda qaboobaha. Cudurku waa cudur, iyo mudo gaaban oo tiro badan oo dhalinyaro ah ayaa jirran kara. Habdhaqanka shimbiraha si aan caadi ahayn looma beddelo, laakiin calaamad muuqaal ah waa dheecaan xoogan oo sanka ka yimaada iyo indhaha.
Daaweyntu waxay isticmaashaa xalka daciifka ah ee manganese, kaas oo lagu jiido sanka iyo indhaha.
Caabuqan wuxuu saameynayaa beerka chicks. Badanaa inta badan biyuhu waa ay xanuunsadaan labadii usbuuc ee ugu horreeya, markaa waxa la soo saaraa difaac.
Astaamaha calaamadaha cudurka waa:
gariir iyo qalalaaso;
Madaxa leexinta iyo hoos u dhigaya dhinaciisa;
xuubka midabka buluug.
Daaweynta daaweynta looma samayn.
Cudurku wuxuu saameeyaa habka neefsashada ee biyuhu ka da'ayaan da'da 1.5 bilood.
Sinusitis waxaa lagu gartaa:
neefta gaaban ee neefsashada;
chicks hindhisada iyo si adag u furo gaajada;
bararka indhaha iyo laalaabka;
Daweyntu waxay isticmaashaa daroogada "Terramycin", oo lagu daro cuntada sida ku qoran tilmaamaha.
Cudurka khatarta ah, oo kala badh ka mid ah kiisaska ayaa ku dhamaanaya dhimashada biyo-biyoodka. Wakiilka keena waa bakteeriyada Salmonella. Caabuqa wuxuu badanaaba ku dhacaa cuntada iyo biyaha, laakin waxa kale oo ay ku dhici kartaa xuubka xabka ee isha ama neefta hawada. Xilliga kabuubku wuxuu soconayaa maalmo ilaa todoba. Ducklings cudurku wuxuu ku dhacaa jirro qaab daran.
Waxay leedahay calaamadaha soo socda:
tabardarnaanta iyo xajmiga;
bararka xuubka xabka;
shuban qafiif ah oo dhiig leh;
indhaha indhaha iyo midhaha;
Cudurku waa adag yahay in la daweeyo. Shimbiraha waa la go'doomiyay waxaana la siiyaa "Tetracycline" (40 mg halkii 1 kg oo miisaankeedu yahay). Laakiin marar badan shimbiraha waa la gowracay, maaddaama shimbiraha dabiiciga ah ay yihiin kuwo sidayaal ah.
Cudurka waxaa sababa by dulin ah oo lagu xakameynayo mindhicirka mindhicirka.
Calaamadahaasi waxay tilmaamaan hymenolepiasis:
tabar iyo niyadjab;
inta badan waxaa jira jirro iskudhaf ah iyo qalal.
Dagaalka ka dhanka ah helminths wuxuu caawiyaa "Fenasal" iyo "Bitionol". Daawada waxaa lagu qasi karaa quudinta heerka qiyaasta 0.3 g ee Fenasal ama 0.6 g of Bitionol per 1 kg oo miisaanka nool.
Way sahlan tahay in laga hortago dhacdada cudurkan marka loo eego si loola dagaallamo, sidaa daraadeed, si uu cudurku u noqdo mid caafimaad qaba, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin qaar:
sii nadiifinta nadiifinta qolka, ku nadiifi cabbitaannada cabbitaanka iyo quudinta. Qalabka waxaa lagu daaweyn karaa warankiilo (400-500 g 10 litir oo biyo ah) ama qolka ku buufin leh 40% xalal farsamo ah. Natiijo wanaagsan ayaa lagu helaa dhibcaha;
laguma talin karo in shimbiraha noocyada kala duwan iyo da 'kasta ay ku jiraan hal guri shimbir ah;
dabaqa ayaa lagu rusheeyaa lime, iyo dusha sare ayaa si fiican loogu daboolay qashin (qiyaastii 5 sm) caws ama jarjar alwaax ah. Qashin-qaadku waa inuu si joogta ah u furmaa loona bedelaa mid qalalan;
Si looga hortago cudurrada leh caabuqyo kala duwan, 5 maalmood ee ugu horreeya ee ducklings waxaa lagu quudiyay Baytril ama Enroxil (1 ml halkii 1 l oo biyo ah);
si looga hortago, waxaa lagula talinayaa in la tallaalo;
Cunto-guurka waa in uu kala duwan yahay iyo taajirsanaanta fitamiinada iyo macdanta. Halkii biyaha, chicks cabbi kara xal casaanka ciriiriga ah ee kaneecada;
Xayawaanka yaryar waa in si joogto ah loo baaraa si loo ogaado cudurada. Helitaanka calaamadaha digniinta, waxaa fiican inaad la xiriirto dhakhtarka xoolaha.
In la ilaaliyo dhammaan tallaabooyinka kahortagga, ilaalinta nadaafadda iyo kala-soocida nafaqada xoolaha, waxaad rajeyn kartaa in shimbirahaagu ay ku koraan caafimaad.
Maxaad ducklings u dhici kartaa cagahooda?
Tabar darida iyo lugaha lugaha waxay noqon kartaa calaamado ka badan hal cudur. Qaar ka mid ah iyaga ayaa ku xusan qodobkayaga.
Hase yeeshee, qaabka guud, sababaha ugu wayn waxay noqon karaan:
cunto aan kala go 'lahayn, oo ka maqan walxaha lagama maarmaanka ah;
Waa muhiim! Xaalad kasta, waxaa wanaagsan inaad la tashato khabiir takhasus leh si uu u sameeyo baaritaanka saxda ah oo uu qoro daaweyn (haddii loo baahdo) ama caawinta hagaajinta cuntada.
Haddii ay dhacdo la'aanta fitamiino ama mareeyn, waa in lagu daraa cuntooyinka qaabka cuntada ama diyaarinta gaarka ah. Marka baarayaasha la ogaado, daawooyinka antiparasitiga ee ku habboon ayaa la soo qorey, waxaanu ku xusanay tan markaad ka hadlaysid cudurrada qaarkood.
Si raaxada xayawaankaagu u caafimaad qabaan, waxaad u baahan tahay inaad siiso dareen ku filan oo aad u abuurto xaalado raaxo leh iyaga. Macaamiisha daryeesha ee shimbiruhu way buuxsamayaan oo caafimaad qabaan. Laakiin haddii aad weli qabto wax dhibaato ah, waxaa fiican inaad la xiriirto khabiirada.